Izinto ezisibhozo ongazaziyo ngam | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 2, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kulungile, kulungile… Ndizakuthatha le kaSteven. Nazi izinto ezi-8 ongazaziyo ngam:
Kunyaka ophelileyo, ndenze olona hlobo lukhulu lwengoma yothando nanini na ndisebenza. Lihambile ixesha, besele siyi3 sobabini apha eofisini yafika kwi Internet Radio. Njengoko bendisenza isiphelo sam esipheleleyo, umphathi wam u-CEO wayejikeleza ikona-wayehamba nomntakwabo bezokundwendwela isakhiwo sethu esitsha. Ndiyazi… do-do-do-do… ndiyazi….
UDebhora, udade wethu ekuphela kwakhe, wayenguYehova Britannica I-Britannia (sp?) Intombazana ye-Jeans phakathi kwi-80s. Ukuba nabahlobo bakho bathethe ngokungayeki malunga nodade kadadewenu kunempembelelo engapheliyo yengqondo. Bendi kwaye ndiyazingca ngaye nangona sinqabile ukuthetha.
Omnye wemisebenzi yam emibi yayinguMmeli weNtengiso weKhadi letyala kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo. Ndisebenze iiveki ezi-2 kwaye andizange ndibhalise mntu. Ndizamile kangangeeveki ezi-2 kuba utata wam uthe mandingaze ndiyeke umsebenzi kwangoko… uyakuhlala ufunda into. Kule meko, ndafunda ukuba uTata wam ebengahlali echanekileyo.
Umhlobo wam osenyongweni kwisikolo samabanga aphakamileyo usengumhlobo wam osenyongweni, kwiminyaka engama-20 kamva. UMike akayifundi ibhlog yam- kodwa sithetha rhoqo kwiiveki ezimbalwa. Yena nenkosikazi yakhe bayamangalisa.
Kule veki kusenokwenzeka ukuba ndenze eyona nto itenxileyo kunye ne-obnoxious ye-blogging career-i-24 ″ yemagnethi yemoto yam:
Ehlotyeni ezimbini ezidlulileyo, ungandifumana kwi-Intanethi phantse rhoqo ebusuku ndidlala Imvula emithandathu kwi-XBox ngoku.
Ibhlog yam ngoku iphakathi kwe- $ 500 ngenyanga kwingeniso, owona mthombo mkhulu Iintengiso Zekhonkco.
Kule mpelaveki ndiza kuba kuyo i-NPR ukuxoxa ngokusetyenziswa kwezixhobo ezikwi-intanethi ekuphuculeni uthethathethwano lomvuzo wakho. Ibiludliwanondlebe oluhle kodwa bendiphelelwe ngumoya ngoba bekufuneka ndikhawuleze ukusuka emsebenzini ndiye kwigaraji yokupaka ndiye eRadio Station kwimizuzu engaphantsi kweyi-20. Andiqinisekanga ukuba iza kuba njani! Ndifumene udliwanondlebe kuba ndiphawule kwiwebhusayithi kwenye indawo endikhe ndayisebenzisa Ingxelo yoMvuzo woMntu oyiSalary.com Ndiza kuthetha-thethana ngomvuzo wam kwaye ndikwanayo ne-Intanethi I-Payraise Calculator.
Ndicinga ukuba sele ndiludlulisile olu hlobo lwe-meme kwabanye, ke andizukuyithumela le- kodwa bendifuna ukuyiphendula!
Agasti 2, 2007 ngo-11: 24 PM
Njengenqaku elisecaleni ndiyavuya ukuba enye-yenza imali nge-TLA kuba khange ndenze nesenti ndayeka naziphi na iintengiso ezake zaboniswa .. kwaye ndizamile kwizihlandlo ezi-3 ezahlukeneyo. Ndide ndine-plugin yazo endaweni kwaye yasebenza .. kum inkonzo ayisebenzi kwaye ayisebenzi.
Ayisiyo yokuba i-AdSense ingcono kodwa kungakhange kubonakale ukuba iintengiso zabo ziyavela… Ndenza okungaphezulu kunokwaneleyo kwezinto kodwa kuyandikhathaza ukubona iiveki zihamba kwaye ndinethamsanqa lokwenza inkunzi enye.
Err .. ooppsss… uxolo ngecala rant LOL
Agasti 3, 2007 kwi-9: 22 AM
Hlanganisa apho kunye ne-TLA. Ndiyakholelwa kwiintengiso are ifihliwe kubalawuli bebhlog. Nje ukuba ndifumane umxhasi omnye, baqala ukuziqengqa emva koko. Ndacinga ukuba ikhona into engalunganga kodwa yinkqubo entle.
Agasti 3, 2007 ngo-10: 10 PM
Oo bendibambelele kwi-TLA okoko zaqala ukufumaneka kodwa andizange ndibenazo iintengiso ezibonisiweyo .. zange .. Ndizamile inkonzo izihlandlo ezithathu ezahlukeneyo ngeli xesha lokugqibela ikhowudi ikho ngaphezulu kweenyanga ezintathu… kwaye nangoku nada
Nokuba i-AdSense ibonakalisa ukuba ngumthwalo wokukhathazeka… ndinokuba neentsuku zokujonga iphepha elifanelekileyo kwaye ndingenzi nesenti (iiveki ukuphela). Ndidinga inkulu yeAdSense ukunceda ndicinga kuba ndiqinisekile ukuba mhlawumbi ndenza into engalunganga… ukuvuma oko kunokuba kunjalo akuncedi amanqanaba okuphoxeka nokuba yenye yenethiwekhi zentengiso.
oh kulungile… kwanele ukuxhwila iiposti zakho uDoug g uxolo kodwa yindawo efanelekileyo ngoku nam
Agasti 3, 2007 kwi-8: 13 AM
Enkosi ngeNqaku lokuDibanisa uLwazi.
Ngaba unayo indawo efanelekileyo yokuthenga
iimagnethi zemoto? Ndisandula ukwenza
enye kwaye wabhala ngayo kwibhlog yam.
Enkosi ngokundwendwela …….
Agasti 3, 2007 kwi-9: 24 AM
Yayiyiposti yakho eyandikhuthazayo! Ndiyalile ngokugqitha KwiGraphicsland kwaye ndayifumana ngeentsuku ezi-2. Ixabiso lalisoyikeka, kodwa ndiyoyika ukuba andithanga ndiqwalasele ubungakanani obaneleyo… lilikhulu! 🙂
Agasti 3, 2007 kwi-10: 57 AM
Kakhulu! Ndonwabile izithuba zam kunye
ifoto incedisiwe. Ubukhulu bulungile kwaye
ifundeka lula. Enkosi nge
ikhonkco ukujonga ixabiso.
Agasti 3, 2007 kwi-11: 48 AM
Yithande imagnethi ebambeleyo. Ungathini malunga nelogo epeyintiweyo ecaleni kwemoto yakho nakwiziphumo eziphezulu?
Kuya kufuneka ndizame i-TLA kwakhona ngelinye ixesha kwaye ndibone ukuba bayandamkela na ngeli xesha. I-AdSense ibinyuke nge-50% kum kwinyanga ephelileyo kodwa asithethi ngamamega s